Ukumakishwa kwendlela Abavelisi bezixhobo eziNcedisayo | China Ukumakisha kwendlela yezixhobo eziNcedisayo kwiFektri kunye nababoneleli
—Ukumakishwa kwendlela Izixhobo zokuncedisa ——
I-LXD yokunyusa isithuthi (inkqubo yokukhwela)
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wesithuthi esonyukayo. Kutheni uhamba ngeenyawo xa uhleli? Sebenzisa isithuthi esonyusa uxhulumaniso kumatshini wokumakisha, ukusebenza kakuhle kuya kuphucula amaxesha ama-2-3.
Umatshini wokumakisha we-LXD
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso woomatshini bokumakisha kwangaphambili. Umatshini wokumakisha kwangaphambili we-LXD ngumatshini oncedisayo kulwakhiwo lokumakisha indlela. Inokuphawula ukumakisha kwangaphambili ngokukhululekileyo ngokweemfuno zokwakha ukunqanda ukumakisha okungalunganga. Inokufezekisa imigca emi-1-3 ngokuzimeleyo, ethi iphucule ukusebenza ngokukuko kolwakhiwo.
Umatshini wokuLungiselela i-LXD-II
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso woomatshini bokuqala. Umatshini wokuqala we-LXD-II sisixhobo esincedisayo ekuphawuleni ukwakhiwa kwendlela.ixhotyiswe nge-injini ye-petroli kunye nesiguquli somoya esizenzekelayo, inenzuzo yokusebenza okuphezulu, okonga abasebenzi, ukusebenza ngokulula, ulondolozo olulula, kunye nobomi benkonzo ende.
I-LXD-II yoxinzelelo lweNdlela ePhakamileyo yoMatshini oBethayo
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wendlela yoxinzelelo oluphezulu lweNdlela oMatshini oBethayo. I-LXD-II umatshini wendlela yokuvuthela umphezulu sisixhobo esincedisayo kulwakhiwo lokumakisha, olusetyenziselwa ukutshayela umphezulu wendlela ngaphambi kolwakhiwo lokumakisha.
Uxinzelelo oluphezulu lweNdlela yokuTshayela
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi-mveliso wendlela yokucinezela ephezulu yendlela. Ukumakisha kwendlela izixhobo zokuncedisa — umphezulu wendlela wokutshayela uxinizelelo ikakhulu olusetyenziselwa ukucoca isamente, udaka, ubunzima bempahla, kunye nomgca wokumakisha opeyintiweyo obandayo. Kuxhotyiswe ngomlawuli wamandla onokuhlengahlengiswa ngokwemeko yendlela yendlela.
I-LXD-II yoXinzelelo lweNdlela ePhakamileyo yokuVuthela nokuTsala uMatshini oMnye-inye
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wendlela yoxinzelelo oluphezulu oluvuthela oomatshini bokutshayela. Isetyenziselwa ukucoca isamente, udaka, umhlaba okhawulezayo ngaphandle kwendlela. Ikwanakho ukuvuthela ukungcola nothuli lwendlela. Inezinto eziluncedo ekuphuculeni ukusebenza ngokukuko kwaye igcina abasebenzi.